पौरखीलाई नेपालमै राम्रो कमाई » Purbihotline
पौरखीलाई नेपालमै राम्रो कमाई
March 19, 2019 पूर्वी हटलाइन	0 Comments
परालको कुटी काटी अपनाउनुपर्ने प्रविधि अपनाइ च्याउ उत्पादनका लागि राखिएको सिलिन्डर, एक सिलिन्डर बराबर चार केजी च्याउ उत्पादन हुने र चार महिना सम्म च्याउ उत्पादन भइ रहने सन्तोष नेपाल बताउछन् ।
इटहरी/उहिलेका बुढापाका भन्नु हुन्थ्यो पौरख विना पुरुष हुन्न तरबार विना धार । भनाँइको तात्पर्य मानिसले आप्mनो क्षमता, बुद्धि, विवेक, शारिरीक परिश्रम आदीले गर्दा हुने सम्म केही नयाँ फरक काम गर्नु पर्छ । अनिमात्र त्यो मानिस काम लाग्छ नत्र काम लाग्दैन् । जसरी तरवारको धार छैन भने तरबारले काट्न सक्दैन त्यस्तो तरवारको काम छैन ठीक त्यसरीनै मानिस पनि पौरखी बन्नु पर्छ । नत्र कसैले गन्दैन जीवनमा केही गर्न सकिदैन, सदा आर्थिक समस्याले सताउने छ भन्ने सन्देश हाम्रा पुर्वजहरुले दिने खोजेको छ । आजको २१ औ युगमा आएर मानिस युग अनुसार चल्न सक्नु पर्छ । विज्ञानले नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राएको छ । आजको जमानामा जो संग सिप र बुद्धि छ, र समयको माग अनुसार चल्न सक्छ तीनै व्यक्ति सम्पन्न हुनेछन् । कम्यूटर प्रविधिका विलगेट्स आज विस्वको धनढ्यको सूचिमा आउने गर्दछन् । उनले नयाँ प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरे त्यसैले उनी धनी तथा सुखि बन्न सके ।
आर्थिक आय आर्जनका लागि यस्ता नयाँ नयाँ प्रविधिहरु धेरै छन्, आजको युृवाहरुले विश्वमा आएका नयाँ प्रविधिलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्ने हो । नयाँ प्रविधि अपनाउन अर्थात कुनै व्यवस्थीत काम गर्न विदेशनै जानु पर्छ भन्ने छैन स्वदेशमा नै पनि फरक काम गरेर प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकाछन् सुन्दर हरैचा नगरपालिका वार्ड नं. ४ निवासी संतोष नेपाल । संतोष नेपालको अहिले मासिक आम्दानी १२/१३ लाख रहेको छ । उनलाई चिने जानेका र उनको व्यसाय जानेका देखेकहरुले उनलाई पौरखीको संज्ञा दिने गरेकाछन् । हुन पनि उनले साच्चैनै पौरख गरेर राम्रो आय आर्जन गरेकाछन् ।
च्याउ खेतीमा सन्तोष नेपाल, उनकी पत्नी लिलादेवी नेपाल , छोराहरु सरोज नेपाल, सुरज नेपाल र जीवन नेपाल, बुहारी मनुजा नेपाल र छोरी सुस्मा नेपाल दिलोज्यान दिएर काम गर्दछन् । परीश्रम गरी पसीना चुहाई खानुमा शान्ती छ भन्ने एक कवीको भावलाई नेपाल परिवारले चरितार्थ गरेको छ । च्याउ खेती र च्याउको वीउ उत्पादन गर्ने कार्यमा परिवारका ७ जनाले मात्र भ्याउन सम्भव छैन त्यसैले नेपालले आवश्यकता अनुसार ८/१० जना कामदारलाइ समेत रोजगार दिएकाछन् ।
सन्तोष नेपालको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वार्ड नं. ३ मा च्याउको वीउ उत्पादन गर्ने ल्याव छ । ल्यावमा ७ जना भन्दा बढी कमदार काम गर्ने गर्दछन् । च्याउको वीउ विक्रि गरेर करिव मासिक ४/५ लाख आय आर्जन गर्दछन् । संतोष नेपालले व्यवसाय गर्न नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालि कम्पनी रजिष्टारको कार्याँलयमा दर्ता गराएर व्यवसाय लाई आधिकारीक बनाएकाछन् । च्याउको वीउ बनाउन आवस्यक पर्ने ढुसी उत्पादन गर्नु नै संतोष नेपालको व्यवसायको सफलता हो । उनका छोरा माइला छोरा सुरज नेपालले भारत तथा नेपालमा गरि करिव १ बर्ष ढुसी बनाउने (च्याउको वीउ बनाउने ) तरिका सिकेका छन् ।
नेपालका अनुसार शुरुमा एउटा करिव ३ सय एमएल जाने सामान्य सीसीमा च्याउको वीउ (ढुसी) उत्पादन गरिन्छ त्यस पछि सो सानो सिसीको ढुसीलाई स्लाइन साइजका बोतलमा इन्जेक्सन दिन लायक लिक्वीड बनाएर राखिन्छ । सो लिक्वीडलाई गहुँको उम्रने शक्ति नष्ट गरेर विभिन्न प्रविधि अपनाई गहुँको पोकामा इन्जेक्सनबाट ढुसी राखिन्छ । ती पोकाहरुमा रहेको गहुँबाटनै च्याउ उम्रने गर्दछ । उनका अनुसार एक सीसी (मुख्य तथा मुल वीउ)ढुसीबाट सय भन्दा बढी लीक्वीड बोतल बनाउन सकिन्छ । उनले लगभग स्लाइन पानी साइजको एक सिसीबाट इन्जेक्सन विधिबाट च्याउको वीउको पोका हजारौ बनाउन सकिन्छ । नेपालले दिएको जानकारी अनुसार एक पोका च्याउको वीउको मुल्य ३० रुपैया मात्र पर्दछ । नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालिले दैनिक १ हजार ६ सय पोका च्याउको वीउ उत्पादन गर्ने गरेको छ । नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालिबाट यस्ता च्याउको वीउको पोका मासिक ४० हजार भन्दा बढी विक्रि हुने गर्दछ । नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालिद्वारा उत्पादित च्याउको विउ १ नं. प्रदेशका १४ वटा जिल्ला र त्यसको अलावा भक्तपुर, ललितपुर, कास्की लगायतका २० जिल्लामा जाने गरेको छ । च्याउको वीउ उत्पादन गरि विक्रि गर्नका लागि नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालिले बजार राम्रो पाएको छ ।
पौरखी संतोष नेपालले बुढी गंगा गाउँपालिका वार्ड नं. ७ मोरंगमा अर्थात सुन्दर हरैचा नगरपालिका र बुढी गंगा गाउँपालिकाको सिमाना वर्मनियाँ भन्ने ठाउँमा च्याउ खेती गरेको करिव ५ वर्ष भएको छ । बुढीगंगा गाउँ पालिका वार्ड नं. ७ मा वर्मनियाँमा च्याउ खेतीका लागि ५ वटा घर निर्माण गरि च्याउ खेती संचालनमा रहेको छ । संतोष नेपालका अनुसार सो च्याउ खेतीबाट दैनिक २०० केजी च्याउ उत्पादन हुन्छ । प्रतिकेजी १ सय ५०ले (होलसेल मुल्य) विक्रि हुने गर्दछ । च्याउ खेतीमा सफलता पाए पछि उत्साही बनेका नेपालले सो च्याउ खेतीको आसपासमै १ बिघा जग्गा ठेक्का लिएर च्याउ खेती बृहद रुपमा गर्ने योजना बनएकाछन् । ठेक्का लिएको जग्गामा नयाँ घर निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सो ठेक्का लिएको जग्गामा तत्काल १० वटा घर निर्माण गरेर च्याउ खेती गरिने पछि विस्तारै बृद्धि गरिने नेपालको भनाई रहेको छ । उनले वर्मनियाँमा राम्रो च्याउ खेती गरेको देखेर अन्य छर छिमेकले समेत च्याउ खेती गर्न शुरु गरेकाछन् । च्याउ खेतीका लागी पहिला घर निर्माण गनुृ पर्ने त्यस पछि पराल को कुटी काटेर सो कुटीलाई बोरामा प्याक गरेर पकाउनु पर्ने र विभिन्न केमीकल वीउ आदी मिश्रण गरिएको परालका टुक्रा प्लाष्टिको सिलिण्डरमा हाली मुख बन्द गर्नु पर्ने र अक्सीजन जानलाई हरेक सिलिण्डरमा करिव ६ वटा सानो प्वाल पारेर रुई राखी दिनु पर्ने हुन्छ । घरमा मिलाएर रो रो बनाएर प्लाष्टिकको सिलिण्डर राख्नु पर्ने छ । नेपालले गरेको च्याउ खेतीमा एउटा घरमा ६ सय ४८ वटा सिलिण्डर राख्न सकिन्छ । एक सिलिण्डरबाट ४ केजी भन्दा बढी च्याउ उत्पादन हुन्छ । बजार भाउ २ सय ४० भए पनि नेपालले भने होलसेलमा प्रति केजी १ सय ५० मा विक्रि गर्ने गरेकाछन् । नेपाल ब्रदर्श मसरुम एण्ड एग्रो रिसर्च प्रालिद्वारा उत्पादित च्याउ धरान, इटहरी, विराटगरमा खपत हुने गरेको नेपाल बताउँछन् ।
नेपालले च्याउ खेतीको आम्दानीबाटै सुन्दर हरैचा नगरपालिका अतरर्गत घडेरी योग्य १० कट्ठा जग्गा करिब ७५ लाखको लागतमा खरिद गरेकाछन् भने गछिया चौक भन्दा सय मिटर दक्षिणमा ९ धुर जग्गा करिव २० लाखको लागतमा खरिद गरेकाछन् । नेपालको सोच तत्काल घर निर्माण गर्ने भन्दा पनि च्याउ खेती लाई बढाएर १ नं. प्रदेशकै ठूलोच्याउ खेती बनाउने योजना रहेको छ । नेपालले सो च्याउ खेती शुरु गर्दा धेरै हैरानी पाएकाछन् । उनले छोरा सुरज नेपाललाई आवस्यक तालिम लिनका लागि नेपाल र भारतमा गरेर करिव ४ लाख रुपैया खर्च गरेकाछन् । च्याउ खेती सुरु गरियो तर आफु संग रकम नहुँदा च्याउ खेती त्यत्तीकै भताभुङ्ग हुन लाग्दा उनले इटहरी स्थित संरक्षित बचत तथा ऋण सहकारीमा ऋण माग गरिएकोमा सो सहकारीले प्रकृया पु¥याएर ५ लाख ऋण दिएकाले च्याउ खेती गर्न सजिलो भएको साथै हौसला मिलेको बताउँछन् । उनलाई समस्या परेको समयमा संरक्षित सहकारीले ऋण उपलब्ध गराएकोले उनी च्याउ खेतीको नामआउना साथ संरक्षित सहकारीको नाम लिन छुटाउँदैनन् । उनी भन्छन् मलाई समस्या परेको समयमा ऋण दिएर सहयोग गर्ने संरक्षित सहकारीलाई म कहिल्यै भुल्न सक्दीन् ।
च्याउको वीउ उत्पादन गर्न सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृतले २ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएकोले उनलाई अझ हौसला मिलेको छ । पछि सुन्दर हरैचा नगरपालिका अन्तरगत रहेको साना किसान सहकारीले पनि केही ऋण दिएकोले च्याउ खेती गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछन् । यसरी च्याउ खेतीमा नेपाललाई हौसला मिल्दै गयो उनले बुढी गंगा गाउपालिका वार्ड नंं ७मा रहेको १२ कट्ठा जग्गा विक्रि गरि च्याउ खेतीमा लगाए । सुरुका दिनमा धेरै रिक्स मोलेर च्याउ खेती शुरु गरेका नेपालको च्याउ खेतीले हाल राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ । उनले गरेको पौरख देखेर सबै जना छक्क पर्छन् । च्याउ खेती र च्याउको वीउ उत्पादन गरेको पौरख देखेर संरक्षित साकोसले उनलाई पुरस्कृत गरेको छ । सफल च्याउ खेती व्यवसायी भनी उनले नेपाल सरकारबाट पनि पुरस्कार पाएकाछन् । उनको च्याउ खेतीले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गरेकाले उनी विभिन्न संघ संस्थाहरुबाट पुरस्कृत भएकाछन् । उनी भन्छन् गर्नेलाई विदेश जानु पर्दैन नेपालमै गरि खाने प्रसस्त ठाउँ रहेको छ ।
नेपालको च्याउको वीउ उत्पादन गर्ने ल्याव हेर्दा सामान्य देखिए पनि काम असामान्य हुने गर्दछ । त्यति जटिल प्रविधि अपनाएर च्याउको वीउ(ढुसी) उत्पादन गर्ने कार्य सामान्य होइन यो काम जो कोहीले गर्न सक्दैनन् र यति धेरै लगानी गर्ने हिम्मत पनि सबकोइले गर्दैनन् । च्याउको वीउ उत्पादन गर्ने कार्य हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यसमा चाहिने सिप , दक्षता, विषय संग सम्बन्धित ज्ञान र पूँजीको लगानी सितिमिति ढंगले कसैले सोच्न सक्दैनन् । च्याउ खेतीमा यति धेरै लगानी हुन्छ भन्ने मानिसले सोचको पनि पाइदैन । सन्तोष नेपालले अचम्मको तथा नयाँ व्यवसाय गरेको भने होइन । सबैले गरेको सामान्य व्यवसाय उनले तन,मन र धन लाएर व्यवसायीक ढंगले काम गर्ने प्रयास गरेका हुन् । व्यवसाय प्रति कटीबद्ध भएर लागेकाले आज उनले व्यवसायीक क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकेकाहुन् । (च्याउ खेतीका सफल व्यवसायी सन्तोष नेपाल संगको कुरा कानीका आधारित)
← गोरखा भूकम्पको परकम्प
बैकको ऋणको व्याजदर घटाउ →
सुनसरीको समग्र बिकासको लागि प्रदेश र संघिय सरकारसंग समन्वय भइरहेको छ–राज्यमन्त्री चौधरी
May 2, 2019 पूर्वी हटलाइन 0
August 30, 2019 पूर्वी हटलाइन 0
सिक्कीमको प्रगतिबाट नेपालले अनुकरण गर्नु पर्ने
March 22, 2019 पूर्वी हटलाइन 0